“ရာ သီ နံ နက် ခင်း များ ရဲ့ အ လွမ်း” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » “ရာ သီ နံ နက် ခင်း များ ရဲ့ အ လွမ်း”
Posted by aye.kk on Aug 3, 2012 in My Dear Diary | 26 comments
နွေ မိုး ဆောင်း ဆို သည့် ရာ သီ နံ နက် ခင်း များ က ။ ကျ မ အ တွက် က အ လွမ်း များ ဖြင့် ပြည့် လို့ နေ ပါ တယ် ။
မိုး ရာ သီ နံ နက် ခင်း လေး များ။
၀ ဿန် ကာ လ ၊ မုတ် သုန် လေ နှင့် အ တူ ပါ လာ သည့် မိုး ဖွဲ လေး များ သဲ သဲ ရွာ သွန်း သည့် အ ချိန် ၊ နံ နက် ခင်း စာ အ ဖြစ် အ မေ စီ မံ ထား ပေး သော ၊ ဆန် ပြုတ် ပူ ပူ ဖြူ ဖြူ မွှေး မွှေး ၊ အ ငွေ့ တ ထောင်း ထောင်း က သောက် ချင် စ ရာ ကောင်း လောက် အောင် ပါ ပင် ။
ဟင်း ရေ သောက် ကြွေ ပန်း ကန် လုံး ထဲ ရှိ ၊ ဆန် ပြုတ် ဖြူ ဖြူ လေး ထဲ တွင် ၊ အ မေ ထဲ့ ပြုတ် ထား သည့် ကန် စွန်း ဥ ၊ ဖြူ ၊ ၀ါ ၊ ခ ရမ်း ရောင် လေး ထောင့် ခပ် စိတ် စိတ် အ တုံး လေး များ အား ၊ ကျ မ မှ အ ငမ်း မ ရ ဆယ် ယူ စား တတ် ၍ လျှာ ကျက် ရ ပေါင်း လည်း ခ ဏ ခ ဏ ပါ ။ က ဇွန်း ဥ လေး များ ဆယ် ယူ စား ပြီး ကုန် လျှင် တော့ ။ ကျန် နေ သည့် ဆန် ပြုတ် ဖြူ ဖြူ အား ၊ အ ရံ သင့် ချ ထား ပေး သည့် ငါး က ကက် တစ် ပဲ ပိ စပ် အ ချို ပေါင်း ကြက် သွန် မိတ် များ များ နှင့် စား ရ သည် ကို လည်း ။ အ မေ့ အား အ ထူး ကျေး ဇူး တင် မိ ရ ပါ တယ် ။
ဒီ ရက် က တ မျိုး နောက် ရက် က တ မျိုး မ ရိုး အောင် လုပ် ကျွေး တတ် သူ က တော့ အ မေ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒီ လို မိုး ဥ တု ရာ သီ မှာ ။ ငါး က လည်း လှိုင် လှိုင် ပေါ သ ဖြင့် ၊ ငါး ဆန် ပြုတ် ပြုတ် ပြီး ၊ ကြက် သွန် မိတ် ပါး ပါး လှီး ခါ ၊ ငြုပ် ကောင်း မှုန့် ၊ ကြက် သွန် ကြော် ဖြူး ပြီး ချက် ပြုတ် ကျွေး မွေး တတ် ပါ တယ် ။
ငါး ဆန် ပြုတ် အ မေ လုပ် လျှင် ။ အ နား မှာ ရှိ နေ သည့် အ ခါ မျိုး တွင် အ မေ က ။ ကျ မ အား ပြ ထား ပေး တတ် ပါ တယ် ။
ပြုတ် ထား သည့် ငါး များ အား ။ အိုး ထဲ မှ ဆယ် ယူ ခါ ၊ အ သား ချည်း နွှင် ပြီး ၊ သပ် သပ် ဖယ် ထား ပါ တယ် ။
တောင် ပျံ (စ ပါး နက် ) ဆန် အား ၊ ရေ စင် အောင် ဆေး ပြီး ။ ဇ ကာ နဲ့ စစ် ထား ပါ တယ်။ နွှင် ပြီး သား ငါး အ သား များ ကို ကြက် သွန် ဖြူ မ ညက် တ ညက် ထောင်း ပြီး ဒယ် အိုး နဲ့ ဆီ သတ် ပါ တယ် ။ ကြက် သွန် ဖြူ ဆီ သတ် တာ ၊ မွှေး လာ ပြီ ဆို ရင် တော့ နွှင် ထား ထဲ့ ငါး အ သား များ ကို ထည့် ပြီး ဆယ် မိ နစ် လောက် ကြာ အောင် မွှေး သည် အ ထိ ထပ် မံ ပြု လုပ် ပါ တယ် ။ ပြီး ပြီ ဆို ရင် တော့ စစ် ထား တဲ့ ဆန် ကို ထည့် ပြီး ငါး မိ နစ် လောက် ထပ် ပြီး အိုး ထဲ မှာ ပဲ ယောင်း မ နဲ့ထပ် မွှေး အောင် ထပ် မွှေ ပြီး ဒယ် အိုး ကို ခ ဏ ချ ထား လိုက် ပါ တယ် ။ ဆန် ပြုတ် ပြုတ် မယ့် အိုး ထဲ ကို ဆန် ပြုတ် ဖြစ် နိုင် သည် အ ထိ ရေ ကို ချိန် ဆ ထဲ့ ပြီး မှ ရေ ဆူ သည် အ ထိ တည် ထား ပါ တယ် ။ ပြီး တော့ မှ သာ ဒယ် အိုး ထဲ မှာ မွှေး နေ အောင် လုပ် ထား တဲ့ ပစ္စည်း တွေ အား လုံး ကို ရေ ဆူ နေ စဉ် မှာ ပဲ ။ ပြောင်း ထည့် ပြီး ။ ငါး ဆန် ပြုတ် အ ဖြစ် ပြုတ် ပြီး နံ နက် ခင်း စာ အ ဖြစ် အ မေ က ကိုယ် တိုင် အ ပင် ပန်း ခံ ပြီး ။ ချက် ပြုတ် လုပ် ကျွေး တတ် ပါ တယ် ။
အ မေ ချက် တာ ကောင်း ရဲ့လား သ္မီး ဟု လဲ အ မေ က အ မြဲ မေး တတ် ပါ တယ် ။
အ ရမ်း ကောင်း သ ဖြင့် ၊ စား ရ တာ ဗိုက် တင်း ကား သည် ဟု ကျ မ မှ ပြော ပြ လျှင် ။ အ မေ့ မျက် နှာ မှာ ပီ တိ ရွှန်း ဝေ လျှက် တွေ့ရ တတ် စ မြဲ ပင် ။ အ ဖေ က ကြား လျှင် နှစ် ထောင်း အား ရ ကျေ နပ် ခါ ၊ ငါ ငယ် ငယ် က လည်း မိ ဘ တွေ က ၊ ဒီ လို ပဲ ဒု က္ခ ခံ ။ အ ပင် ပန်း ခံ ။ မ စား ချင် ရင် စား ချင် လာ အောင် ၊ ချက် ပြုတ် ကျွေး မွေး လာ ခဲ့ တာ ။
သ္မီး တို့များ များ စား နိုင် မှ သာ ၊ ခ န္ဓာ ကိုယ် က ဖွံ့ဖြိုး ထွား ကျိုင်း လာ မှာ ။ အ စား စာ အာ ဟာ ရ ပြည့် ၀ အောင် စား သုံး မှ ရော ဂါ ဘေး ဘ ယာ ကင်း ဝေး ပြီး ၊ ကျန်း မာ သန် စွမ်း စိတ် ရွှင် လန်း တာ ပေါ့ ဟု ၊ အ ဖေ က အား ရ စွာ ပြော ကြား တတ် ပါ တယ် ။ အ မေ က တော့ အ ဖေ့ မျက် နှာ အ ရိပ် အ ကဲ ကြည့် ကာ ဂုဏ် ယူ မ ဆုံး သည့် အ ပြုံး များ က ဖြင့် ။ ဝေ ဝေ ဆာ ဆာ နဲ့ ၊ တွေ့ ရ စ မြဲ သာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
မိုး ရာ သီ နံ နက် ခင်း များ တွင် ၊ အ မေ က တစ် ခါ ၊ တစ် ခါ ဆန် ပြုတ် စား ရ သည် မှာ ရိုး အီ နေ မည် စိုး ပြီး ၊ ကောက် ညှင်း ထုတ် များ အား အ ထုတ် ကြီး ကြီး ထုပ် ၍ ပျော် ပျော် ပါး ပါး လုပ် ကျွေး တတ် ပါ တယ် ။
ကျောင်း ပိတ် ရက် နံ နက် ခင်း များ နှိုက် ။ ရံ ဖန် ရံ ခါ ဆို သ လို မျိုး ။ အိမ် က ရ ခိုင် ငှက် ပျော ဖီး များ အ ပင် မှာ ၀င်း မှဲ့ တာ တွေ့လျှင် ၊ ခူး ချ ပြီး ၊ ပျော် အောင် ထား ခါ ။ ကောက် ညှင်း ဆန် အား ရေ စင် စင် ဆေး ပြီး ။ ဇ ကာ နှင့် စစ် ထား ကာ ။ ငှက် ပျော ဖက် များ ခင်း ပြီး ကောက် ညှင်း ဆန် များ အား ။ ငှက် ပျော ရွက် တ တောင် ဆုပ် ခန့် မျှ အ ရှည် ထဲ တွင် ၊ ကောက် ညှင်း ဆန် အား လို သ လို ထည့် ပြီး ၊ အ လယ် တည့် တည့် တွင် ရ ခိုင် ငှက် ပျော သီး ပျော် ပျော် မှည့် မှည့် အား ။ အ လုံး အား ပြား သွား အောင် လက် နှင့် အ နည်း ငယ် လိုက် ဖိ ၍ ၊ အ ပေါ် တွင် ကောက် ညှင်း ဆန် အား ထပ် တင် ပြီး ဖုံး လျှက် ။ သင် ကြိုး နှင့် ကြပ် ကြပ် စည်း ကာ တုတ် နှောင် ပြီး ထုတ် ပါ တယ် ။ ကောက် ညှင်း ထုတ် များ ထုတ် ပြီး သွား ပြီ ဆို လျှင် တော့ ။ အိုး ထဲ တွင် ထည့် ခါ ရေ မြုပ် အောင် ထည့် ပြီး ၊ မီး ပြင်း ပြင်း နှင့် အ မေ က ပြုတ် ပေး တတ် ပါ တယ် ။ ကောက် ညှင်း ထုတ် ပြီး ပြုတ် ထား သည့် အ ချိန် မျိုး တွင် ၊ အုန်း သီး ခွဲ သူ က ခွဲ ၊ အုန်း သီး အ သား အား အုန်း ခြစ် နှင့် တ မျိုး ။ ခြစ် သူ က ခြစ် ။ ဖန် စီ ခွက် အ ဖုံး လေး အား ။ လက် ကိုင် ကိုင်း တတ် ပြီး ခြစ် သူ က ခြစ် ။ နှမ်း မဲ ၊ နှမ်း ဖြူ အား ဆ တူ ရော နှော ပြီး ၊ ဆား နည်း နည်း ထဲ့ ခါ မွှေး လာ အောင် အ မေ က အ နံ့သင်း သင်း လေး ဖြစ် အောင် လှော် ထား ပေး ပါ တယ် ။ အ အေး ခံ ပြီး ဆုံ ထဲ တွင် လက် ဆ လေး ဖြင့် အ လုံး ကွဲ ယုံ လောက် သာ ။ သာ သာ လေး ထောင်း ပြီး နှမ်း ထောင်း အ ဖြစ် လုပ် ပါ တယ် ။
အ မေ ထုတ် သည့် ကောက် ညှင်း ထုတ် ကြီး က အ တော် လေး ပင် ကြီး ပါ တယ် ။ ကျက် လျှင် တော့ အ အေး ခံ ပြီး လက် နှစ် လုံး မျှ ထူ ထူ လှီး ပြီး ၊ ခြစ် ထား သည့် အုန်း သီး များ ၊ နှမ်း ထောင်း မွှေး မွှေး လေး ဖြူး ပြီး ၊ စား သုံး ရန် ။ အ ပင် ပန်း ခံ ပြီး ။ လုပ် ကျွေး တတ် ပါ တယ် ။
အ မေ ထုတ် ကျွေး သည့် ။ ကောက် ညှင်း ထုတ် လို မျိုး က ၊ ၀ယ် စား ၍ မ ရ ။ ကောက် ညှင်း ထုတ် က စ ပါယ် ရှယ် ထုတ် ထား သ ဖြင့် ၊ ကြီး လွန်း လှ ပြီး ၀ယ် စား ၍ မ ရ နိုင် မှန်း သိ ကြ ပါ သည် ။
အ မေ က ၀ယ် စား တာ ကြိုက် လား ဟု မေး လျှင် ။ အ မေ ထုတ် တာ အ ကြိုက် ဆုံး ဟု ။ မောင် နှ မ များ က ပြိုင် တူ ၀ိုင်း ဖြေ မိ ကြ ပါ တယ် ။
မိုး ရာ သီ နံ နက် ခင်း စာ များ အ ဖြစ် ။ မုန့်လုံး ကြီး အုန်း နို့ ဆမ်း လည်း မ ကြာ ဆို သ လို ၊ လုပ် ကျွေး တတ် သည့် အ မေ့ အား ။ မိုး ရာ သီ နံ နက် ခင်း လေး များ ရောက် တိုင်း အ ရမ်း လွမ်း မိ ရ ပါ တယ် ။
ဆောင်း ရာ သီ နံ နက် ခင်း လေး များ ။
ဆောင်း လေ တိုက် ခတ် ပြီး ၊ အ အေး ဓတ် လေး ရ သည့် အ ချိန် ။ နံ နက် စော စော စီး စီး အိပ် ရာ မှ အ မြဲ နိုး နေ တတ် ပြီး ။ နေ ပူ ဆာ လှုံ တတ် သည့် ကျ မ တို့မောင် နှ မ များ အား ၊ အ ရံ သင့် စား သုံး နိုင် ရန် အ တွက် ၊ အ မေ စီ စဉ် ဆောင် ရွက် ပေး တတ် သည် မှာ ။ နေ့စဉ် ဒူ ၀ အ မြဲ ဘဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ဆောင်း ဥ တု ရောက် တိုင်း ။ ၀က် နံ ရိုး အား နေ့စဉ် ၀ယ် ပြီး အိုး တစ် လုံး ထဲ တွင် နူး အိ နေ အောင် တစ် နေ ကုန် မီး အေး အေး နဲ့ မီး ဖို ပေါ် မှာ ပြုတ် ထား ပေး ပြီး ။ အ ဖေ့ အ ကြိုက် ရိုး ရာ ဟင်း အ မယ် အ နေ ဖြင့် ။ ၀ တ္တ ရား မ ပျက် နေ့စဉ် ချက် ကြွေး ပါ တယ်။
ဆောင်း ရာ သီ ၊ တွင် ရာ သီ စာ အ ဖြစ် ပေါ် သည့် မုန် ညှင်း အ ခါး ။ မုန် ညှင်း အ ဖြူ များ ပေါ် ချိန် တွင် ။ အ မေ့ မှာ နား ရ သည် မ ရှိ။ မုန် ညှင်း ခါး လှိုင် လှိုင် ထွက် လျှင် အ မေ က အ မြောက် အ များ ၀ယ် ယူ ပြီး အ ချဉ် တယ် ပါ တယ် ။
နေ့ခင်း နေ့လည် ဆို လျှင် ။ ကျ မ တို့ပါ မ နား ရ ။ ကျောင်း က ထ မင်း စား ချိန် ပြန် လာ လျှင် တော့ ။ အ မေ ဆား ဖြင့် နယ် ထား သည့် မုန် ညှင်း ခါး များ အား အိမ် ရှေ့ နေ ထိုး သည့် ကြိုး တန်း ပေါ် တွင် ၀ိုင်း ကူ ၍ လှမ်း ပေး ကြ ရ ပါ တယ်။
ဆောင်း ရာ သီ ၊ သီး နှံ ဖြစ် သည့် ပိန်း ဥ ။ အ ထူး သ ဖြင့် ထော ပတ် ပိန်း ဥ ကို အ ဖေ က ဆန် ပြုတ် ထဲ မှာ အ မြဲ ထည့် ပြုတ် ခိုင်း ပါ တယ် ။
မ နက် စား သုံး ဘို့အ တွက် ။ မ နေ့ထဲ က တည် ထား တဲ့ ၀က် နံ ရိုး အ ရည် ကို ၊ နံ ရိုး အ သား တွေ သပ် သပ် စီ ဆယ် တင် ပြီး မှ ။ ၀က် နံ ရိုး အ ရည် ကို ဆူ အောင် တည် ပြီး ရေ ဆေး ထား ပြီး စစ် ထား တဲ့ ဆန် ကို ထည့် ပြီး ပြုတ် ပါ တယ် ။ ဆန် ကို ထ မင်း အ နေ ထား ဖြစ် လာ မှ ပဲ ။ ရေ စင် အောင် ဆေး ပြီး ။ လေး ထောင့် အ နေ တော် အ ရွယ် တုံး ထား တဲ့ ၊ ထော ပတ် ပိန်း ဥ နဲ့ အ တူ ။ နှူး အိ ပြီး ကျက် နေ တဲ့ ၀က် နံ ရိုး ပါ အ တူ တူ ရော ထည့် ပါ တယ် ။ ပြီး ရင် ပိန်း ဥ ကျက် လာ ပြီး ဆန် ပြုတ် အ နံ့ လည်း မွှေး မှ သာ ရေ စင် အောင်း ဆေး ပြီး လှီး ထား တဲ့ ။ မုန် ညှင်း ခါး အ ရွက် တွေ ကို စား ခါ နီး မှ ထည့် ပါ တယ် ။
အ ရ သာ က ။ တစ် နေ ကုန် တည် ထား တဲ့ ၊ ၀က် နံ ရိုး တွေ တုံး ပြီး ပြုတ် တဲ့ အ ချိန် မှာ ။ အ ချို ။ အ ငံ ။ ဟင်း ခပ် အ မွှေး အ ကြိုင် တွေ နဲ့ ပြုတ် ထား လို့ ။ ကျက် လာ တဲ့ ဆန် ပြုတ် ကို ပူ ပူ လေး ငြပ် ကောင်း ။ ကြက် သွန် ကြော် ထည့် ပြီး အ မေ က ဆောင်း ရာ သီ နံ နက် ခင်း စာ အ ဖြစ် နဲ့ စီ မံ ချက် ပြုတ် ကျွေး မွှေး ပါ တယ် ။ မ ညီး မ ညူ လုပ် ကျွေး တာ က အ မေ ကျန်း မာ နေ တဲ့ အ ရွယ် ထိ တိုင် ပါ ။ ကျ မ တို့မောင် နှ မ တွေ ကို ပြု စု လုပ် ကျွေး ခဲ့ တာ ပါ ။
မုန် ညှင်း ခါး ကို အ ချဉ် ထား တဲ့ ။ မုန် ညှင်း ချဉ် ကို အ ဖေ တို့ အ ခေါ် အ ဝေါ် က( ကြမ် မ် ဆိုင် )လို့ခေါ် ပါ တယ် ။ မုန် ညှင်း ချဉ် ရ တဲ့ အ ချိန် ဆို ။ ၀က် သား သုံး ထပ် သား ကို ကြမ် မ ဆိုင် နဲ့ချက် ကြွေး ပါ တယ်။
တစ် ခါ တစ် ရံ လည်း အ မေ က အ ဖေ့ အ ကြိုက် ၀က် သား လုံး ကြော် ပြီး ။ ကြမ် မ ဆိုင် နဲ့ အ တူ ပဲ ပြား ကို လေး ထောင့် အ တုံး လေး တွေ ကို ဆီ နဲ့ တင်း အောင် ကြော် ပြီး ။ (၀က် သား လုံး ၊ ပဲ ပြား ၊ ကြမ် မ ဆိုင် ) သုံး မျိုး ပါ ၀င် တဲ့ ဟင်း ပေါင်း လို လုပ် ကြွေး ပြီး ။ ဆန် ပြုတ် အ ဖြူ ထည် နဲ့ ကျွေး မွှေး စီ မံ ဆောင် ရွက် ပေး တတ် ပါ တယ် ။
ဆောင်း နံ နက် ခင်း တွေ တိုင်း ။ အ အေး ဓါတ် လွန် ကဲ ပြီး ၀မ်း မီး ငုပ် တတ် လို့ ။ ၀မ်း မ ချုပ် စေ ရ အောင် ။ တ ပါတ် နှစ် ခါ ။ မန် ကျီး ဖျော် ရည် ကို ည က တည်း ထ ညက် နဲ့အ ချဉ် ဖောက် ထား ပြီး ။ ဆေး က ရ မက် ။ လိပ် သည်း ကျောက် တွေ နဲ့ ၊ ပုံ မှန် မ သောက် မ နေ ရ တိုက် ပါ တယ် ။
ဒီ ကြား ထဲ အ ဖေ့ ရိုး ရာ ကန် တော့ ပွဲ တွေ ကြုံ ရင် ။ အ မေ က အ ရမ်း ပင် ပန်း ပါ တယ် ။ တစ် ခါ မျှ ငြီး ငြူ တယ် ဆို တာ ။ ကျ မ တို့ မ ကြား ခဲ့ ပါ ဘူး ။ အ မေ က အချိန် ဟာ အ ရမ်း တန် ဘိုး ရှိ တယ် ။ အ ချိန် ရှိ သ လောက် ၊ အ ကျိုး ရှိ အောင် အ သုံး ချ ရ မယ် ဆို တာ ကို ပဲ ။ အ မြဲ တ စေ ပြော ပြ တတ် ပါ တယ် ။
နွေ ရာ သီ နံ နက် ခင်း လေး များ ။
ပျော် စ ရာ အ ရမ်း ကောင်း ပါ တယ် ။ ဆန် ပြုတ် လုပ် ကျွေး တာ နား ပြီး ။ မုန့် ဟင်း ခါး ။ ကြာ ဇံ ကြီး ။ မ နက် တိုင်း ဈေး ထဲ က နေ ၊ သွား ရေ စာ အ ဖြစ် ၀ယ် ကျွေး ခဲ့ လို့ပါ ဘဲ ။ အ မေ့ အိပ် ကဒ် ထဲ အ ကြွေ စေ့ လေး များ ကုန် အောင် သုံး တဲ့ အ ချိန် ပါ ဘဲ ။ မ နက် စော စော ထ ပြီး ၊ ဘ်ိန်း မုန့်၊ မုန့် စိမ်း ပေါင်း ၊ မုန့် လက် ကောက် ၊ ကောက် လှိုင်း တီ မုန့် ၊ အ စ ရှိ တဲ့ အ မေ မ လုပ် တတ် တဲ့ မုန့် များ ကို ၀ယ် ကြွေး တတ် ပါ တယ် ။ ကျ မ တို့မောင် နှ မ တွေ က တော့ ။ ကိုယ် ကြိုက် နှစ် သက် တဲ့ မုန့်ပဲ သွား ရေ စာ များ ကို ။ လက် ညိုး ထိုး ပြ ပြီး ။ အ မေ နဲ့ အ ဖေ့ ကို ပူ ဆာ ၀ယ် ကျွေး ခိုင်း တတ် ခြင်း ပါ ဘဲ ။
အ ဖေ့ စီ မံ မှု များ အ ရ ။
နွေ ရာ သီ ည နေ ခင်း တိုင်း မှာ ၊ နေ့စဉ် ပုံ မှန် သံ ပု ရာ ဖျော် ရည် ။
ဆောင်း ရာ သီ နေ့ လည် ခင်း တိုင်း မှာ ၊ အိမ် ရှေ့မှာ စိုက် ထား တဲ့ ဆန်း ကွတ် သီး ( ဖျော် ရည် သီး ) မှည့် ချိန် ဖျော် ရည် သီး ဖျော် ရည် ။
အ မေ နှင့် အ ဖေ ။
အ မေ လုပ် ကျွေး ခဲ့ သည့် ရာ သီ နံ နက် ခင်း ပေါင်း များ စွာ ။
အ ချိန် တန် တော့ ….။
ကျ မ တို့ တွေ အ ရွယ် ရောက် ပြီး ။ အိမ် ထောင် ရက် သား အ သီး သီး ကျ ခဲ့ ကြ ပါ တော့ တယ် ။
ကိုယ် ကို တိုင် မိ ဘ နေ ရာ ။အ စား ထိုး ၀င် ရောက် နေ ရာ ယူ ခဲ့ ရ ပြီး ။ သား သ္မီး တွေ မွှေး ဖွား လို့ အ ရွယ် ရောက် လာ ချိန် မှာ တော့ ။ ကိုယ့် ကို ပြု စု လုပ် ကျွေး ။ လူ လား မြောက် လာ ခဲ့ စေ တဲ့ ။ ကျွေး မေ မေ ကျေး ဇူး ရှင် ကို အ ခါ ခါ လွမ်း ရင်း ။ တမ်း တ ရင်း နဲ့ သာ ။ ရာ သီ နံ နက် ခင်း တွေ ကို အ လွမ်း တွေ နဲ့ သာ ။ ဖြတ် သန်း လာ ခဲ့ ရ တဲ့ သူ တစ် ယောက် ၊ ဖြစ် လာ ခဲ့ ရ ပါ တော့ တယ် ။။
( ကျေး ဇူး ရှင် ကျွေး မေ မေ ၏ ဂုဏ် ကျေး ဇူး များ အား သ တိ ယ လွမ်း ဆွတ် လျှက် )
မအေးရဲ့ မိခင်က တော်တော်အချက်အပြုတ်နိုင်နင်းတာပါလား….
ဒီနောက်ပိုင်းတော့ အဲသလို အချက်အပြုတ်ကောင်းဖို့ တော်တော်ခက်သွားပါပြီ။
အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတော့- ခပ်ညံ့ညံ့အစားအစာတွေပဲ ၀ယ်စားကြရတော့တာပေါ့…။
အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ ကျုပ်တော့ အရင်ခေတ်ကိုပဲလွမ်းမိပါတယ် မအေးရေ..။
မအေး မိခင်က စုံလင်စွာချက်ပြုတ်ကျွေးတယ်နော်။ မအေး သားသမီးတွေလည်း အစားစုံစားရလို့ ကံကောင်းမှာပေါ့နော်။
မမအေးရေ ရခိုင်ငှက်ပျောသီးပါလို့ ဗျ။ကျနော်က အရမ်းကြိုက်တာလေ။
ရခိုင်ယဉ်ကျေးမှုအရ၊မိန်းကလေးတွေကိုလုံမပျိုလို့ ပဲခေါ်ပြီးသုံးနှုံးတာပါ။ဘ၀မှာမေ့လို့ မရနိုင်ခဲ့ပါဘူးကွယ်။။
အမအေးက ရခိုင်ငှက်ပျောသီးကြွေးရမှာစိုးလို့ ကျနော်ကြတော့ထည့်တောင်မပြောရှာဘူးနော်။
ရေးရင်းနဲ့ ကျန်ခဲ့မိတာပါကွယ်၊အားနာမှုများစွာနဲ့ တောင်းပန်လိုက်ပါရစေ။
အခုခေတ် သားသမီးမရသေးတဲ့ အိမ်ထောင်ရှင်တွေလဲ သားတွေ သမီးတွေ ရလာရင်
ကျွေးမွေးပြုစု လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင် စောင့်ရှောက်ကြရတော့မယ်
အန်တီအေးတို့ ခေတ် ၊ ကျွန်တော်တို့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ ခေတ်မှာ ရှေးလူကြီး အဘိုးအဘွားများရဲ့ ကောင်းမှုနဲ့သဘာဝအတိုင်း ဆိုးဆေးမပါ ဆီသန့် သန့် လေးနဲ့အစားအစာ မုန့် ပဲသွားရေစာတွေနဲ့ အတူ ကြီးပြင်းခဲ့ကြရတယ်
ဒီနေ့ ခေတ် ကလေးငယ်တွေ ချာတိတ်တွေ စားနေကြရတဲ့ တရုတ်ကနေ ဝင်လာနေတဲ့ ဘာမှန်းမသိညာမှန်းမသိ မုန့် ထုပ်တွေ ၊ မယ်လမင်းတွေနဲ့ နို့ မှုန့် တွေ ကို မြင်ရတော့…
အန်တီအေးလိုပဲ ငယ်ဘဝကို ပြန်လွမ်းမိတယ်
ကိုယ့်မှာသားသမီးရခဲ့ရင်လဲ ၊ ဒီနေ့ ခေတ် ရှိနေတဲ့ ဘာတစ်ခုမှ စိတ်မချရတဲ့မုန့် ထုပ်တွေ ကြားမှာ…
လွမ်းလဲလွမ်း မောလဲမော ရတယ်ဗျား
ဒီစာတွေကိုဖတ်ပြီး နောက်ဆုံးမှာ ဟိုသီချင်းလေးကို သတိရလိုက်မိပါတယ် ..
ဖေဖေရယ် xxx မေမေရယ် xxx ကြင်စတုန်းက xxx စလယ်ဝင်အိုးလေးကို သုံးကာ xxx
အဲ့ဒီ သီချင်းပေါ့ဗျာ …
အမအေးရဲ့ အဖေနဲ့ အဖေက
တော်တော် ဂရုစိုက်ကြတယ်ဆိုတာကို ဒီစာတွေကိုဖတ်ရင်း
သတိထားလိုက်မိပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း ……….
စကားမစပ် ရွာက အဖေနဲ့အမေကို ပြန်လွမ်းမိသွားပါကြောင်း …
ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာဝိသမစီးပွားရေးနဲ့ ဝင်လာတဲ့မုန့် တွေကြောင့်..
ကလေးတွေကစားသုံးဘို့ မသင့်လှပါဘူး။တစ်ပိုင်တစ်နိုင်သန့် သန့် ရှင်းရှင်းနဲ့ လုပ်ရောင်းတဲ့..
အဖေနဲ့ အမေကိုပြန်လွမ်းသွားတယ်ဆိုလို့ …
ကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း အဖေနဲ့ အမေက အိမ်မှာပဲ ချက်ကျွေးတာများတယ်။
မိသားစုတွေ စုပြီး ချက်ကြပြုတ်ကြ စားကြ သောက်ကြနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတယ်။
ကျမတို့မောင်နှမတွေက ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းလာတက်တော့ ကျောင်းပိတ်ရက်ပြန်ရင် အဖေက သူကိုယ်တိုင် အထူးစပါယ်ရှယ် စီစဉ်ပြီး ချက်ကျွေးတာ။
ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ကျနော့်ကတော့ အမေ့အစား အဖွားကိုဘဲလွမ်းရပါတော့တယ်။
ငယ်ငယ်က အဖွားလုပ်ပေးတဲ့ မုန့်တွေကို ငြင်းပယ်ခဲ့မိတာ အခုမှ နောင်တတွေရမိတယ်ဗျာ။
ကျမတို့မောင်နှမတွေကိုသွားခိုင်းရင်နေ့ တိုင်းနံနက်မိုးလင်းတာနဲ့ သွားရတယ်…
လိုအပ်တယ်ဆိုပြီး၊မစားပဲပစ်ထုတ်မှာစိုးလို့ အဖွားကသူ့ မျက်စိရှေ့မှာတင်ပဲစားခိုင်းတာ။
အဲဒီအချိန်ကမစားချင်ပဲစားရလို့ ၊ စိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာအမြဲလိုလို၊ကြာလာတော့ငြီးငွေ့ လာရော…
ငါးဆန်ပြုတ်လေး ပြုတ်သောက်ကြည့်အုန်း မယ် အန်တီအေးရေ။
အခုခေတ်တော့ အလွယ်ရတဲ့ မုန့်ကိုပဲ အပြင်ကနေ လွယ်လွယ်ဝယ်စားမိနေတော့တယ်။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာ လက်ဝင်တာရယ် အချိန်မပေးနိုင်တာရယ်နဲ့ ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်တာရယ်နဲ့ ။
အမေကတော့ တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါးသုတ်တို့ ငါးထမင်းဆိတ်တို့ ရဲယိုရွက်နဲ့ ထုပ်တဲ့ ဟင်းထုပ်တို့ မကြာမကြာလုပ်ကျွေးဖူးပါတယ်။ ကျမကတော့ ဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိ မလုပ်တတ်သေးဖူး။
စားချင်ချင် မစားချင်ချင် ..
ငြင်းမရဘဲ စားရမဲ့ အစာဖြစ်နေတော့ ..
ခုထဲက လေ့ကျင့် ပြီး စားထားသင့်သလား…။
ဆန်ပြုတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ သောက်ကြတာလည်း၊ဒီကဓလေ့အရလားလို့ အန်တီကမေးတော့…
အန်တီတို့ ကငယ်ငယ်ထဲကနံနက်မိုးလင်းရင်ဆန်ပြုတ်ကိုပုံစံအမျိုးစုံနဲ့ သောက်ပြီးကြီးပျင်းလာခဲ့လို့ ။
အမျိုးကို စုံနေတာပဲ.. နည်းပညာ လိုက် မမှတ်တော့ဘူး နာမည်ပဲ မှတ်ထားတော့မယ်.. လမ်းကြုံရင် အိမ်လည်ပြီး နာမည် မှတ်ပြီး တောင်းစားတော့မယ်နော်။
အစ်မ အမေကတော့ တကဲ့ မိခင်ကောင်း ပါဘဲ။
အစ်မ အမေ လက်ရာတွေ က စားချင်စရာ ကောင်းသလို ကျန်းမာရေးနဲ့ လဲ ညီမဲ့ ပုံဘဲ။
စားစရာ တွေကို ရသပါအောင် ဖွဲ့ပြ ခဲ့တဲ့ အစ်မ ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စိတ်နဲ့ မှန်းပြီး လဲ အားလုံးကို စားသွားပါတယ်။ :-)
ရာသီအလိုက် အစားအသောက်လေးတွေက ကောင်းလိုက်တာ…
အေးကေကေ က ကံကောင်းတာပေါ့နော်…..ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့သူရဲ့ သမီးဖြစ်ရတာ..။